'Waligay Jaamacad ma dhigan balse ka qoomamaynmayo' - BBC News Somali
'Waligay Jaamacad ma dhigan balse ka qoomamaynmayo'
21 Sebtembar 2019
Markii Sana Sodawalan ay dhammaysatay dugsigeedii sare, ma aysan hubin waxa xiga ee ay samayn doonto.
Jaamacad ayay codsatay balse muddo sannad ah ayay sugaysay, muddadaas oo aysan go'aansan wixii ay mustaqbalka samayn lahayd.
Intii ay muddadaas sannadka ah ku jirtay ayay baratay qaabka loo sameeyo keegga waxayna bilowday in ay online soo geliso sawirrada Keegga ay samayso.
Afar sano gudahood, ayay heshay dad gaaraya 133,000 oo qof oo ku xiran barteeda Instagram-ka waxayna heer ka gaartay xirfadda samaynta kackaca ama Keegga iyo buskut-ka.
Haddaba, sidee ayay haatan dareemaysaan kaddib markii si lama filaan ah ay u noqotay qof saamayn leh?
Sana Sodawalan ayaa sheegtay in waalidkeed oo reer Aasiya ah ay la jeclaayaan in noqoto dhalkhatarad oo ay barato cilmiga caafimaadka ama culuumta daawooyinka, balse ay ayadu fursad kale samaysatay.
"Qoyskayga ayaa I taageeri jiray tan iyo markii aan bilaabay waxbarashada waxayna jeclaayeen in aan dhakhatarad noqdo". ayay tidhi.
Waxay BBC-da u sheegtay in shaqadeeda ay ka bilowday guriga si joogta ahna ay ugu baahin jirtay baraha bulshada wax soo saarka ay samayso taas oo markii dambe keentay in ay caan noqoto.
Sana Sodawalan waxay sheegtay in ay jeceshahay shaqadeeda taasina ay keentay in ay ku guulaysato ganacsigeeda oo ay heer ka gaarto.
Waxay intaas ku dartay in samaynta kackaca ay jeclayd oo markii hore aysan niyaddeeda ku jirin in ay ganacsi ka samayso balse markii dambe ay dadku ka heleen wax soo saarkeeda.
Sana ayaa samaysatay bog Instagram ah si ay ugu soo bandhigto keegga ay samayso.
"Waxaan waqti geliyay in aan dhiso Instagram-kayga, waxaan soo gelin jiray sawirrada keegga aan sameeyo si iska caadi ah, qofkii ugu horreeyey ee farriin ii soo qoray wuxuu I waydiiyey "ma lagaa dalban karaa keegga aad samayso? Markiiba waxaan ku orday hooyaday oo aan waydiiyey 'hooyo ma iibiyaa'? waxay ahayd kadis kuma talo gelin in aan iibiyo keegga".
Sida ay sheegtay Sana kuma aanay talo gelin in ay iibiso Keegga balse si lama filaan ah ay ugu dhalatay fikraddaan ayadoo dadkuna ay si joogta ah u waydiinayeen in ay iibiso keegga ay samayso taas oo keentay in markii dambe ay xirfad ka dhigo.
Waxay sheegtay in Instagram-ku uu kaalin weyn ka qaatay iibinta wax soo saarkeeda, sidaas awgeedna marka ay joojiso in ay soo geliso sawirrada uu ganacsigeedu hoos u dhaco.
Sana waxay sheegtay in markii hore ay ku bilowday in maalintiiba ay samayso 1000 xabbo oo keeg ah mararka qaarna ayba daali jirtay sida ay taagan tahay, haddase ay noqotay sharikad weyn oo ay dhaqaale badan samaysay.
Muuqaal Dhakhtarad khadka Sykpe-ka ka daawaysa bukaan Soomaaliya jooga
Dhakhtarad khadka Sykpe-ka ka daawaysa bukaan Soomaaliya jooga
Muuqaal Soo saaraha filimka Qab iyo Iil oo BBC La hadlay
Soo saaraha filimka Qab iyo Iil oo BBC La hadlay
Muuqaal Daawo nin Soomaali ah oo kumanaan doolar looga dhacay Islii
Daawo nin Soomaali ah oo kumanaan doolar looga dhacay Islii
Muuqaal Baaritaan ay samaysay BBC oo lagu ogaaday macalimiin faro xumeeya ardaydooda
Baaritaan ay samaysay BBC oo lagu ogaaday macalimiin faro xumeeya ardaydooda
Muuqaal Halkan ka daawo wareysiga madaxweynaha Puntland
Halkan ka daawo wareysiga madaxweynaha Puntland